Vee24: Ntinye aka na vidiyo na-eme ka ntụgharị gbanwee site na 38% | Martech Zone
Satọde, 18 Juun 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu a, enwere m ahụmịhe kachasị ịtụnanya Ogbodo 24Ngwọta vidiyo dị n'ịntanetị maka weebụ. Companylọ ọrụ ahụ anọwo afọ ole na ole na-emezue ngwaike ngwanrọ na ngwanrọ dị ka ngwọta ọrụ nke dị ọnụ ala.
Kedu Ogbodo 24 emezuchaghị ihe dị ịtụnanya. Mgbe onye ahịa bịanyere aka na ya, ha na-ebu ụzọ zụta ngwaike, nke gụnyere ụlọ elu nke nwere igwefoto vidiyo, ọkụ ọkụ n'ihu, igwe na-agbasa ozi n'ikuku na ọbụna ọkụ ikuku. Kọmputa bụ nyocha 24 ″ ihuenyo mmetụ na-agba ọsọ Windows 7 na ngwa Vee24.
Sọftụwia ahụ anaghị emepe emepe ma bido vidiyo. Ọ na-apụta ọmarịcha div na-enye gị ka gị na onye ọzọ wee kparịta ụka. Onye nnọchi anya nwere ike ibido popup ahụ, bido ya na akpaghị aka, ma ọ bụ onye ọrụ nwere ike pịa taabụ mara mma n'akụkụ ihuenyo iji malite ya.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ anabata òkù ahụ, sọftụwia ahụ jikọtara gị na onye nnọchi anya ya. N'iji meghee nkata vidio (ị nwere ike gbanye igwefoto gị, onye nnọchianya nwere ike ịhụ nkọwa niile nke ihe nchọgharị gị (Sistemụ arụmọrụ, Nchọgharị, wdg) na ọbụlagodi ibe nwere oke nha. Ha nwekwara ike wepu windo ha. nke ụzọ iji nye gị ụlọ kachasị elu.
Ikekwe atụmatụ kachasị ịtụnanya bụ na Vee24 nwekwara atụmatụ oke - na-ekwe ka akwụkwọ, ike ike ma ọ bụ faịlụ ọ bụla ọzọ meghee ma kesaa. Ọbụghị naanị na ịnwere ike ịkekọrịta ya… ị nwere ike ịmekọrịta yana onye nnọchi anya gị. CEO Andy Henshaw jere ije m site na ịtụ ezumike na saịtị ọzọ… ahụmahụ ahụ dị ịtụnanya, enweghị ike ịdị mfe. Anyị abụọ nwere ike ime mgbanwe na ụdị ahụ n’otu peeji, n’otu oge wee nyefee ya!
Nsonaazụ ndị ahịa Vee24 abụrụworị ihe ịtụnanya… ụlọ ọrụ dịka Ford, Lexus, Lands 'End, Mini Couper, Heels.com na ọtụtụ narị ụlọ ọrụ ndị ọzọ na - ahụ 38% buliri na ọnụego ntụgharị. Nzaghachi ndị ahịa nke usoro ahụ apụla na chaatị ahụ.
Nke a bụ ngosipụta vidiyo nke Vee24 na World Internet:
Ọ bụ ezie na a na-ahụ ọtụtụ nsonaazụ ozugbo na mkpọsa, enweghị m ike iche n'echiche ihe itinye ego na ngwanrọ dị ka nke a nwere ike ime maka njigide ndị ahịa na Software dị ka ụlọ ọrụ Ọrụ. Ikike n'ezie ịhụ ibe gị na ịkekọrịta ihuenyo ga-eme ka ọrụ ndị ahịa dị mfe kama nro ọ dị ugbu a! Ọ dị ka Vee24 abụghị naanị onye isi na ụlọ ọrụ a, ha bụ naanị ụlọ ọrụ na-enye ọrụ a ugbu a. O doro anya na ha ga-enwe nnukwu ọganiihu! Anyị na-dakwasị ha maka ntinye aka.
Ya mere echefula ime ka ha mata na ị chọpụtala banyere ọrụ ahụ site na Martech Zone!
Tags: Gmail (gam akporo)Yahoo Mail (Desktọpụ)
Oge mgbasa ozi
Jun 20, 2011 na 1: 44 PM
Na vee24: Enweghị ike ikwenye karịa. Anyị na-eji ụlọ vee24 maka ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ahịa na ahịa German ma ọ dị egwu. Mana ihe dị mkpa dị ka teknụzụ: ọ na - enyere ndị ahịa anyị aka ịchụ ahịa. N'uche m, nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji wee na-eduga ma na-agbakwunye ahịa na ịntanetị!